တရုတ် ESD Cleanroom wiper ထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ | Bei Te မှ
Lint-free degradable ECO စက္ကူ
Lint Free M-3 သုတ်သည်
PP Melblown သုတ်သည်
SMT Stencil wiper လိပ်
ESD သန့်စင်ခန်း wiper
0609 သန့်စင်ခန်း wiper
ကျွန်ုပ်တို့၏ ESD သုတ်များကိုတစ်မူထူးခြား။ လည်ပတ်မှုမရှိသောအစတည်ဆောက်မှုတွင် antistatic polyester နှင့် carbon core နိုင်လွန်ပစ္စည်းများမှထုတ်လုပ်သည်။ အမှုန်အမွှားမျိုးဆက်နှင့်ထုတ်ယူနိုင်သောဓာတုပစ္စည်းများအလွန်နည်းသော wipers များကိုသန့်ရှင်းမှုနှင့်ပစ္စည်းသန့်ရှင်းမှုအကောင်းဆုံးအတွက်သန့်ရှင်းရေးနှင့်ထုပ်ပိုးသည်။
၁။ သန့်ရှင်းမှု၏ဂုဏ်သတ္တိများ၊ အပျက်အစီးများမရှိ၊ ခိုင်ခံ့သောဆွဲအားနှင့်မြင့်မားသောစုပ်ယူမှုတို့ဖြင့်သုံးရန်အဆင်ပြေသည်။
၂။ ၎င်းသည်လျှပ်စစ်စုပ်ယူမှုမြင့်မားသောစုပ်ယူမှု၊ လွယ်ကူသော fluffing၊ ဒေါင်လိုက်နှင့်အလျားလိုက်ရှုထောင့်နှစ်ခုစလုံးတွင်ခိုင်ခံ့သောဆန့်ထွက်အားကိုကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။
ပစ္စည်း 100% Polyester နှင့်ကာဗွန်ဖိုင်ဘာ
အလေးချိန် 120gsm +/- 5gsm
အထုပ် 150pcs/အိတ်, 10bags/ctn
အရွယ်အစား4"x4",6"x6",9"x9", သို့မဟုတ်ဖောက်သည်အရွယ်အစား
အနားသတ် လေဆာဖြတ်ခြင်းသို့မဟုတ် Ultrasonic ဖြတ်ခြင်း
အောင်လက်မှတ် SGS ရော့
မျက်နှာပြင်ခံနိုင်ရည် 10E6-10E9 ohms
ကုန်ပစ္စည်းသော့ချက်စာလုံးများ ESD Anti-static Wipers/ ESD Cleanroom Wipers/ lint free ESD Microfiber cleanroom wiper
၁။ အလွန်ကောင်းမွန်သောစုပ်ယူမှု၊ ဆပ်ပြာမလိုပါ
2. Low particles ။ အသုတ်တိုင်းသည်အခြောက်သုတ်နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းရေးဓာတုဗေဒနှင့် တွဲ၍ ထိရောက်သည်။
3. Excellent wetting ဝိသေသလက္ခဏာများ
၄။ SMT လုပ်ငန်းစဉ်များတွင်အသုံးပြုသောသန့်ရှင်းရေးစက်များအတွက်အထူးသင့်တော်သည်
၅။ Electronic ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် optical သန့်ရှင်းရေးလုပ်ငန်းစဉ်များအတွက် Static dissipative ESD wiper
အခြေခံအလေးချိန် (+/- ၅ %)
အထူ (+/- 0.05mm)
အတန်း ၁၀၀ မှ ၁၀၀၀ အတွင်းသန့်ရှင်းသောအခန်းအတွက်
IC တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း၊ မိုဘိုင်းလ်ဖုန်းနှင့် disk ထုတ်လုပ်မှုတွင်တွင်ကျယ်စွာအသုံးပြုသည်။
လျှောက်လွှာ: Semiconductor ထုတ်လုပ်ရေးလိုင်း၊ ချစ်ပ်များ၊ Semiconductor စည်း၊ Disk drive၊ ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများ၊ LCD display ထုတ်ကုန်၊ SMT ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ တိကျသောတူရိယာများ၊ သန့်ရှင်းသောအခန်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်းစသည်တို့
ဆားကစ်ဘုတ်ထုတ်လုပ်မှုလိုင်း၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာကိရိယာ၊ ကင်မရာမှန်ဘီလူး၊ မျက်မှန်နှင့်မော်တော်ယာဉ်များတွင်သုံးသည်
ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ၊ ဓာတ်ခွဲခန်းရှိကိရိယာများ၊ ဖန်များ၊ နူးညံ့သောမျက်နှာပြင်များနှင့်အထွေထွေသန့်ရှင်းရေးတို့အတွက်ဒီဇိုင်းထုတ်ထားသည်
ယခင်: Microfiber Cleanroom wiper ပါ
နောက်တစ်ခု: LCD လိပ်သုတ်
Lcd Wipe Roll ကို
Microfiber Cleanroom Wiper ခွဲ
Sub Microfiber Cleanroom wiper ပါ
Microfiber Cleanroom wiper ပါ
Polyester သန့်စင်ခန်းသုံး wiper
နေရပ်လိပ်စာ: 2nd၊ Jue Yuan စက်မှုဇုန်၊ Li Gang Road South, Sha Jing Town, Bao-an District, Shenzhen, China